Ho mora ve ny handefa backlinks amin'ny 2018?
Ny fifandraisana amin'ny rohy dia nitana anjara toerana lehibe tamin'ny fikatsahana motera. Na izany aza dia niova isan-taona ny fomba fananganana rohy. Ny lehibe indrindra dia niseho tamin'ny 2013 rehefa namorona ny Google Update ny penguin Google. Io fanavaozana io dia nahitana ny hevitra rehetra hita, nanandratra ny lanjan'ny kalitaon'ny rohy tafiditra ary namotika ireo rohy rehetra momba ny spammy.
Amin'izao androntsika izao, ny fanamboarana rohy dia adihevitra tena mampiady hevitra. Milaza ny manam-pahaizana iray fa nihena ny lanjan'ny rohy ivelany ary ny hafa kosa milaza fa nihalehibe ny lanjany. Ireo tsy fahazoan-dàlana ireo dia vokatry ny famoahana rohy spam, ary ny fampitam-baovao Google tsy miankina izay manova ny laharam-pahamehana ao amin'ity sehatra ity.
Na izany aza, na inona na inona zavatra renao momba ny fananganana rohy, dia mbola misy fiantraikany mivantana amin'ny toerana misy anao. Tsy misy tranonkala afaka avoaka amin'ny SERP tsy misy kalitao sy rohy mifandraika amin'izany.
Amin'izao fotoana izao dia tapitra ny 2017 taona, ary isika dia mialoha ny fetin'ny Krismasy 2018. Google dia mbola mitolona amin'ny fampiasana teknolojia fananganana spammy sy ny rohy mifandraika amin'ny loka. Ny teknika fananganana Spammy dia lasa adidy. Ny mpamaky webmasters dia manapa-kevitra ny hampiasa vola amin'ny famokarana maimaim-poana sy famoronana rohy. Mampisy fifaninanana avo lenta izany.
Tsy afaka manontany tena isika hoe inona no fiovana vaovao azontsika iainana amin'ny sehatry ny fananganana rohy amin'ny 2018. Amin'ny maha-tompon'ny tranonkala miroborobo, mila mahafantatra ny zavatra tokony hatao ianao ary inona no tsy azonao.
Ho hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba azo antoka momba ny hoavy mba hahatonga anao hijanona ao amin'ny TOP ny lalao fanatsarana ny fikarohana.
Azo atao mora foana ny miverena amin'ny 2018?
Manao ny zava-drehetra amin'ny tanana
Miaina ao amin'ny tontolo manerantany izay ahitana zavatra tena sarobidy ny zavatra noforonina amin'ny ankapobeny,. Ataovy azo antoka fa manondro ny mpitarika ny lohan'ny tsenanao ianao mba hahazoana bakalava bebe kokoa. Aza mandeha maimaim-poana mailaka rehefa manintona azy ireo toy ny spam amin'ny adiresy.
Ankoatra izany, aza lavina amin'ny rindrambaiko fanorenana rindrambaiko maimaimpoana satria mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny toerana misy anao sy ny lazanao izany.Manoro hevitra mafy aho amin'ny firesahana ireo manam-pahaizana SEO matihanina izay afaka manangana rohy amin'ny tranokalanao amin'ny fomba tanana.
Rafitra fananganana rafitra rohy ho an'ny rindrina
Ity dia teknolojia ankamantatra ankapobeny izay ampiasain'ireo manam-pahaizana SEO hahazoana rohy mankany amin'ny loharano. Mifototra amin'ny fitadiavana ny votoatin'ny kalitao ao amin'ny ati-nao izay efa noheverina ho loharano mibaribary ary mikaroka fahafahana mamorona votoaty tsara kokoa ao anatin'io hafatra io ihany.
Mila mandinika ireo bokin-dahatsoratra vaovao ao amin'ny tsenanao ianao mba hametraka ny rohy ao aminao. Raha avoaka amin'ny loharanom-baovao azo itokisana io votoaty io, dia azo inoana fa efa manana ny laharana ambony izy. Izany no antony maha-tombontsoa anao ny hahazo ny sira mifandraika amin'ny loharanom-pahefana. Amin'ny famoronana votoaty mifototra amin'ny fikarohana, afaka manalavitra ilay voalohany ary mandray valiny tsara Source .